Khabar Kantipur » बजारमा मन्द विष कार्वाइड” हालेर पकाएका आँप फेला ! जनचेतनाको लागि सियार गरौ
बजारमा मन्द विष कार्वाइड” हालेर पकाएका आँप फेला ! जनचेतनाको लागि सियार गरौ
बढ्दो गर्मीसँगै तराइको जन जिवन कष्ठकर भएको छ । गर्मीको मौसममा आँप धेरैको लागि मनपर्ने फल पनि हो । यो बिचमा मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै हानिकारक कार्वाइड प्रयोग गरेर पकाइएको आँप रौतहट सहित तराईका स्थानिय बजारमा खुल्याम रुपमा बिक्रि वितरण भइरहेको पाइएको छ ।
भारतको विभिन्न स्थानमा रहेका फलफूलका गोदामहरुमा कार्बाइड प्रयोग गरी पकाएका आँपहरु तराईका विभिन्न जिल्लाका शहरहरुमा बिक्रिको लागि धमाधम ल्याउने गरिएको खुल्न आएको छ ।
यसरी विभिन्न बिषादी प्रयोग गरेर पकाइएको आँप स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने भएकोले खान नहुने स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताएका छन् ।
अहिले चन्द्रनिगाहपुर चोकको विभिन्न घुम्ती पसलमा विक्रिका लागि बिषादी प्रयोग गरिएका आँप राखिएका छन् । तराईका जिल्लाहरुमा मात्रै नभई देश भरि नै भारतीय आँपको राम्रो प्रभाव रहेको छ । आँपमा बिषादी हालेर पकाइने गरेकोले विशेष सावधानी अपनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
चन्द्रपुर हस्पिटल प्रालीका प्रमुख डा. सुवास चौधरीले हनिकारक रसायन हालेर पकाएको आँप खादा मानिसलाई रिङ्गाटा लाग्ने, वाकवाकी आउने, पेटपोल्ने र झाडापखाला हुने तथा शरीरमा बिभिन्न समस्या आउने उल्लेख गरे ।